Adobe After Effect နဲ ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ် — MYSTERY ZILLION
Adobe After Effect နဲ ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်
Adobe After Effect က Video နဲ့ပတ်သက်တဲ့Special Effect ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်..။ မျောက်သိသလောက်လေးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်..။ Adobe Premiere ကိုတော့လူတိုင်းလိုလို သုံးဖူးကြမှာပါ..။ Premiere ကတော့ရိုးရိုးသာမာန် Video များအတွက် တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်Default ပါ၀င်သော Effect အနည်းသာပါရှိပါတယ်..။ ဗွီဒီယိုတစ်ကားလုံးစာအတွက်တော့တည်းဖြတ်ရာမှာ အကောင်းဆုံး လို့ပြောလို့ရပါတယ်..။ အခု After Effect ကတော့ခေတ်နဲ့အညီ ဗွီဒီယိုတွေဖန်တီးရာမှာ နောက်ဆုံးပေါ် Effect များနှင့်မိမိဉာဏ်ရှိသလို အသုံးချတည်ထွင် ကာ ကိုယ်ပိုင် Idea များကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..။ Video Editor တွေအတွက် မတတ်မဖြစ်တတ်ထားရမယ့်အသုံးချမှုဆော့၀ဲလ်လေးပါ...။
အခုပြောချင်တာကတော ့Adobe After Effect နဲ့တွဲ သုံးရတဲ့Trapcode တွေအကြောင်းပါ။
After Effect နဲ့တွဲသုံးရတဲ့Trapcode ပေါင်း ( ၉ ) မျိုးရှိပါတယ်။
1. Trapecode 3D Stroke
2. Trapecode Echo Space
3. Trapecode Form
4. Trapecode Horizon
5. Trapecode Lux
6. Trapecode Particular
7. Trapecode Shine
8. Trapecode Sound Keys နဲ ့
9. Trapecode Starglow တို ့ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီဆော့၀ဲလ်လေးက ပေါ ့ပါးတဲ့Powerful ဆော့၀ဲလ်တွေပါ..။ အဆင် ့မြင့်တဲ့Video တစ်ခုဖြစ်အောင် ဒီ Software တွေနဲ့လိုသလို တီထွင်ယူလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့MATRIX ဇာတ်ကား, Star War ဇာတ်ကားများကဲ့သို့Effect များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ After Effect က 3D နဲ့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးလို့ရတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ဗွီဒီယိုကို ပိုပြီးအသက်၀င်စေတယ်ပေါ ့။
Trapcode တစ်ခုချင်းစီ အတွက် Tutorial တွေကို လည်း youtube, metacafe နဲ့webside တွေပေါ်မှာ အလွယ်တကူလေ့လာလို့ရပါတယ်..။ Download အတွက် Trapecode ၉ မျိုးစလုံးကို Window XP ရော Vista မှာပါ အသုံးပြုလို့ရအောင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။
တစ်ချိုု့Trapcode တွေက Vista မှာ တင်မရတာတွေရှိလို့ပါ။ Trapcode တွေအပြင် After Effect နဲ့တွဲသုံးရတဲ့CPO Preset ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကိုတော့ အလျဉ်း သင့်တဲ့အခါ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါမယ်။
Trapcodes များကို Full Version Download ယူပါ။ ( Rapidshare ) 29.9MB
rar file ကို ဖြည် တဲ့အခါ
Install လုပ်တဲ့အခါ Default Location အတိုင်းအသုံးပြုရွေ့မရပါက အောက်ပါ Location မှ ပြောင်းလည်းထည့်သွင်း ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
့မြန်မာ ဗွီဒီယို အဆင့်အတန်းကမ္ဘာ နှင့်ရင် ဘောင် တန်းနိုင်ပါစေ...။:6:
Could you makeatutorial for adding subtitle to any kind of videos like myanmar vcd subtitles, which is overlapping two color effects. It would be great if someone make tutorial on how to do that.
ဒေါင်းလုပ် လင့်က ဒေါင်းလို့မရတော့ပါ....ပြန်စစ်ပေးစေလိုပါတယ်ခဗျာ
ခုလို ပြောပြမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ...